10 Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda | Chengetedza Chitima
musha > Famba Europe > 10 Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda
Chitima Kufamba, Chitima Kufamba China, Dzidzisa Kufamba Japan, Chitima Kufamba Norway, Chitima Kufamba Russia, Chitima Kufamba Switzerland, Famba Europe
Murenje, kana kuti pasi kusvika kune gurusa reef reef munyika, pasi peZviedza zveMaodzanyemba, izvi ndizvo 10 kamwe-mu-mu-mu-hupenyu hwekuenda. saka, kana iwe uchitsvaga isingakanganwike yekushanya muKenya, kana kupi zvako pakati peMongolia neMoscow, ipapo unofanira kutarisa nzvimbo idzi.
Imwe yenzvimbo dzekupedzisira dzemusango uye epic pasi rese, Masai Mara National Reserve inzvimbo imwe chete muhupenyu hwese. Kusabatwa nebudiriro, Masai Mara inzvimbo yakanaka kwazvo yekuenda. Uyezve, ari kuchengetedza nzvimbo ndiko kumusha kune vanhu vakawanda zvikuru vanotama munyika, vachisiya mucherechedzo pamuenzi wese. saka, vachiona kutama kukuru; katsi dzemusango, mbizi, uye zvimwe zvikara zvakawanda zvinongori kure nemamita mashoma munzvimbo yazvo yakasikwa inoyevedza chiitiko chinoshandura hupenyu..
saka, kana iwe uchishuvira kuenda kune inoshandura hupenyu hwekushanya mune imwe yeanofema kwazvo nzvimbo dzekuchengetedza zvisikwa munyika, unogona kusarudza pakati pekufamba mudenga mumhepo inopisa kana ne4X4. zvisinei, unofanira kuronga safari yako yezororo pakati paJuly naSeptember, kuti zvipupurire mapoka ezvikara zvomusango anoshamisa zvikuru anotonga migwagwa nenyika dzeKenya, panguva yekutama.
2. Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda: Macchu Picchu
Yakavigwa kure mumakomo eAndes, akasiiwa asi asina kukanganwa guta reMachu Picchu. Zvisaririra zvakanaka zveInca empire zvinomira zvakasimba mumazana emakore emamiriro ekunze emusango, vakagadzirira kugovera zvakavanzika zvePeruvia empire kune zviuru zvevashanyi vanosvika zuva rega rega, netsoka, bhazi, uye chitima.
Kana uchishanyira Machu Picchu, uchashamiswa nehukuru nenzvimbo yeguta rekare. Iri guta guru rakavakwa uye rakachengetedzwa sei pakati pepasi pePeru, chinoramba chiri chakavanzika. zvisinei, chakavanzika chikuru ndicho chikonzero vagari vakasiya Machu Picchu. saka, unogamuchirwa zvakanyanya kujoina akawanda anotungamirwa mashanya panzvimbo uye edza kutsvaga. Uyezve, iwe uchave nekutarisa mune imwe yeanonyanya kunakidza tsika nenzvimbo munyika. saka, ive shuwa yekurodha yako kamwe-mu-a-hupenyu rwendo kuenda kuMachu Picchu ASAP mukati 2022.
3. Trans-Mongolian Chitima kubva kuMoscow kuenda kuMongolia
Nzvimbo mbiri dzinoshamisa pasi rose iSiberia neMongolia. Nekuda kwekufambisa kwenjanji kwemazuva ano, nhasi munhu anogona kufamba kune ese ari maviri murwendo rumwe chete, kuburikidza nechitima cheTrans-Mongolian. Kubva kuMoscow, kuburikidza neSt. Petersburg uye Lake Baikal, Gobi Desert, uye kusvika kuBeijing, iyo Trans-Mongolian rwendo runoshamisa.
Kwete chete uchava nemaonero anoshamisa kubva pahwindo rako pachitima, asi iwe uchava nemukana ushoma wekuyambuka 6 nzvimbo dzenguva. Kunyange ichi chiri chimwe che chitima chakareba kwazvo chinokwira munyika, muTrans-Mongolian rwendo rwechitima rwakakodzera kutora. saka, kana iwe uri kutsvaga dhizaini inoshandura hupenyu, saka iwe unofanirwa kutanga kuronga rwendo rwako kuenda kune ino kamwe-mu-mu-hupenyu hwekuenda kwezhizha rinotevera.
4. Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda: Tromso, Noweyi
Kusangana naAurora chiitiko chinoshandura hupenyu uye nzvimbo yakanakisa yemusangano uyu mukuru uri muTromso dhorobha.. Mumoyo weaurora zone, muNorwegian Arctic, iwe unogona kuona inoshamisa kwazvo polar mwenje inoratidzwa munyika. Spirals, mwaranzi, maketeni, uye kupenya kwechiedza chechisikigo zviratidzo zvemwenje wepolar, zvinoonekwa chete munzvimbo dzakakwirira, kufanana nematunhu eArctic neAntarctic.
Just 5.5 maawa kubva kuLondon nechitima, iyi kamwe-mu-mu-a-upenyu kuenda kunzvimbo iri nyore kwazvo kusvika. Nzvimbo yayo yepakati inoshamisa, makuru pubs, uye maresitorendi anokwezva vafambi vanobva kumativi ose enyika. Nguva yakanakisa yekuzadzisa chiroto chako muchokwadi ndiZvita kusvika Kurume kune maonero akanakisa eNorth Lights muNorway.
5. Bali, Indonezhiya
Tropical, girinhi, serene, Bali iparadhiso yepasi uye imwe yepamusoro 5 kamwe-mu-mu-mu-hupenyu hwekuenda. Musha kune matemberi ekare, Balinese tsika, zvinoshamisa eco-friendly holiday rendi, uye pekugara, nemaonero anokatyamadza, Bali inzvimbo isingakanganwiki yekufambisa.
saka, vafambi kuenda kuBali vanosangana nemashiripiti ekuona uye mamiriro ekunze munyika, tisingatauri nezvenzvimbo dzinosiya munhu asingatauri uye achishamiswa pamberi pechimiro chinobwinya. Pamusoro pe, mipata yakasvibira, uye zvinoshamisa nemapopoma, gadzira mufananidzo wakafanana nekadhi uye nzvimbo iyo vese vanoda kuenda, kamwe chete muhupenyu.
6. Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda: Great Barrier Reef, Ositireriya
Kutambanudzira pamusoro 900 zviwi uye kupfuura 2000 ? km, iyo huru barrier reef muAustralia inzvimbo inorota kune chero mutsiki uye anofarira snorkeling.. Iyo incredible coral reef iri muQueensland, kwaunogona kuona 1500 marudzi ehove, zvinoshamisa fauna, nemakorari akaisvonaka.
The Greater Barrier Reef inyika inoshamisa iri pasi pegungwa. saka, kana uine rombo rakanaka, unogona kuona zvimwe zvisikwa zvekare zvichituhwina pedyo newe. saka, kurongedza mabhegi ako, snorkeling kana scuba diving gear, kwekamwe-mu-a-hupenyu rwendo kuenda kuGreat Barrier Reef muAustralia.
7. Kapadhokiya, Teki
Kutasva chibharumu chemhepo inopisa pamusoro peKapadhokiya muTurkey chinhu chinonakidza. Uyezve, iwe uri mudenga, uchaona mamwe mavara emhepo inopisa uye nzvimbo yeKapadhokiya inoputika. zvisinei, kana uchitya nzvimbo dzakakwirira, wobva waona mabharuni emhepo inopisa kubva mukamuri yako yehotera kana cafe yekunze, chichava chiitiko chisingakanganwiki.
Mukuwedzera kune adrenaline kumhanya kwekuve mumakore, iwe uchaona ukuru hwenyika yakasiyana yeKapadhokiya. Semuyenzaniso, mupata weMonks uzere nematombo akaita sechimuni anomisa nyika. Uyezve, dzimba dzeBronze Age nemachechi akavezwa mumakomo, inzvimbo dzinoshamisa dzekushanyira muKapadhokiya. Kuzvipfupikisa, Kapadhokiya musha wenzvimbo dzausingazooni chero kupi zvako pasi pano.
8. Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda: The Swiss Alps
The Swiss Alps inzvimbo isingakanganwiki chero nguva yegore, asi muchando vanonyanya kunaka. Muchirimo uye zhizha unogona kunakidzwa nekufamba uye mitambo yekunze, munguva yechando unofanira kuedza snowshoeing. Ehe, snowshoeing mutambo wechando wakasiyana, uye neshangu dzakakodzera, unogona kuongorora zvakawanda Alpine landscape.
Mutambo wakasiyana-siyana wechando wakatanga kumativi ose 6,000 makore apfuura uye yakave yakakurumbira muSwiss Alps ine chando. Kubva kuChamonix neMont Blanc kuenda kuEcrins National Park, unogona kunakidzwa neakanyanya kunaka maonero emakomo paunenge uchikwira chando. Aunganidze zvinhu, maSwiss Alps anozivikanwa senzvimbo yekuenda, asi snowshoeing yaita imwe yacho 10 kamwe-mu-mu-mu-hupenyu hwekuenda.
9. Patagonia, Ajendina
Mazaya echando, makomo anoyevedza, masango, pristine lagoons, Patagonia muArgentina iparadhiso yekufamba. Uyezve, izere nemakwara uye zvinoyevedza kuona, iyo National glacier park yePatagonia inzvimbo kamwe-mu-mu-hupenyu hwese kuenda kuNorth America..
Pamusoro pe nzira dzechinyakare dzekukwira makomo, vafambi vane ruzivo vanogona kukwira kuRio Negro glacier, semuyenzaniso. Nemamwe mashoko, unogona kuzviwana uchikwira pamusoro pechando, gomo rine chando kune adrenaline uye yakasarudzika ruzivo. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinoshamisa zvaunogona kuita muPatagonia inoshamisa.
10. Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda: Japani
Imwe nguva pakati paKurume naKubvumbi Japan inotumbuka mupink uye chena maruva echeri. Iyo Sakura inotumbuka mavara Kyoto, Tokyo, nemamwe maguta mumhepo yemashiripiti uye mufaro. Kuroya zvisingarambiki, panguva yekutumbuka kwaSakura, Japan inowira mukukotsira, kugadzikana kwakakosha kunobata hupenyu hwekumhanya kwazvo muJapan. Iyi mamiriro ekunze akasiyana anokwezva mamirioni evashanyi vanoenda kuJapan kuzororo rechirimo.
saka, kana ukawana mukana wekufamba kure kwenguva yemashiripiti, ipapo chirimo muJapan ndiyo nguva yakakodzera yekushanyira. Pamusoro pekuedza chikafu cheko, kushanyira temberi dzegoridhe, uye zvinoshamisa Tokyo skyscrapers, kuva nepikiniki pasi pemiti yeSakura chiitiko chekare-mu-mu-hupenyu hwose.
Isu tiri Chengetedza Chitima uchafara kukubatsira kuronga rwendo kune idzi 10 Kamwe Muhupenyu Hupenyu Kunoenda pasi rese.
Iwe unoda kumisa yedu blog positi "10 Kamwe Muhupenyu Hwese Kuenda" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Fonce-lifetime-destinations%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
Dzidzisa Kufamba Holland, Chitima Kufamba The Netherlands, Famba Europe
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Famba Europe, Yoga mu Europe